Ma ogtahay in ay jiraan rag & dumar guud ahaan aan kacsan karin? | Raganimo University
Ma ogtahay in ay jiraan rag & dumar guud ahaan aan kacsan karin?
February 20, 2019~1 minute
Kacsiga waa loo kala badanyahay oo waxaa jira dad aad u kacsi badan iyo kuwa uu ku yaryahay. Sidoo kale waxaa jira dad guud ahaan aan kacsan karin. Kacsiga aan ka hadlayno lagama wado ninka guskiisa oo kaca iyo iwm balse waxaa laga wadaa dareenka qofku in uu jecelyahay in uu galmo sameeyo.
Waxaa jira dadka qaar lagu tilmaamo wax luuqada Ingiriiska lagu yiraahdo (Asexual) kuwaasoo guud ahaan aysan xiiso ku hayn galmadu. Waxay dadkaani isugu jiraan dumar iyo rag. Iyagoo ay adagtahay in laga dhaadhiciyo in ay galmo sameeyaan maadaama uu ka maqanyahay dareenkii kacsiga. Soomaalidu qaar waxay u maleeyaan in kacsiga dumarku uu ku jiro kintirka balse kacsigu waa mid niyada ah. Haddii uu qofku niyada ka kacsado xitaa haddii la guday kacsigiisu waa ku jiraa.
Dadka aan kor ku soo xusnay waa kuwo inta badan arintaan qariya. Iyagoo wali sameeya galmada balse aan sidaa ugu raaxaysan karin maadaama uu ka maqanyahay kacsigii niyada. Ragga nuucaas ah ayaa qaasatan waxaa laga yaabaa in uusan gusku u kicin marka ay dumarka sariirta la tagaan. Balse dumarka lagama dareemayo marka laga reebo in aysan muujin wax raaxo ah. In raga uu gusku u kici waayo waxaa keeni kara cudur balse qofka dareenkii niyada uu ka maqanyahay cudur ma ahan.
Haddii gacalisadaada ay u muuqato mid aan xiisanynayn galmada waxaa laga yaabaa in ay ka midtahay dadka aan kor ku soo xusnay ama waxaa laga yaabaa in ay jiraan xaalado kale sida cudur ama cadaadis nolosha ah oo keeni kara in qofku uusan galmada xiisayn.